सेक्सका लागि कुन समय ठीक ? शोधले भन्छ, ‘विहानको समय उत्तम’ – Hamrosarokar
By Hamrosarokar	 On २१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार २२:२२
एजेन्सी, २१ जेठ–तपाईं हप्तामा अथवा महिनामा कतिपटक यौन सम्पर्क राख्नुहुन्छ ?
के यौनको फ्रिक्वेन्सी अर्थात् संख्या अनि यौनप्रतिको तपाईंको अभिरुचिमा कमी त आएको छैन । यदि तपाईं यो कुरालाई लिएर चिन्तित हुनुहुन्छ भने तपाईंको यौन सम्पर्क राख्ने तरिका नभई समय गलत हुन सक्छ ।
एकपटक आफ्नो सेक्स सेड्युललाई ध्यान दिनुहोस् । तपाईंले जुन समयलाई यौन सम्पर्कको लागि उत्तम मान्नुहुन्छ, त्यो सही समय नहुन पनि सक्छ ।
तर, डा। माइकल ब्रुअसको मतमा यो ठीक होइन । डा.माइकलका अनुसार अधिकांशले राति यौन सम्पर्क राखे पनि त्यसको सही अनुभव उनीहरुले लिन पाउँदैनन् । किनकि त्यस समय शरीर र मस्तिष्क दुवै थाकेको हुन्छ । त्यसैले यौन सम्पर्कको भरपूर आनन्द त्यस बेला लिन सकिँदैन ।डा। माइकलका अनुसार विशेष यौन अनुभूतिका लागि मर्निङ सेक्स सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।
श्रीमान-श्रीमती नै मन्त्रीः ओली पक्षमा लाग्दा शेरबहादुर तामाङलाई दोहोरो फाइदा